To-Fu Fury, sakafo ninja amin'ny fampiharana ny herinandro | Vaovao IPhone
To-Fu Fury, sakafo ninja ao anatin'ny faran'ny herinandro
Pablo Aparicio | | Lalao IPhone, fivarotana
Amin'ity indray mitoraka ity, ny fampiharana amin'ny herinandro dia lalao mahaliana: To-Fu Fury. Amin'ity anarana ity, Amazon Games Studios dia manome antsika ninja somary miavaka, satria sombi-tofu izy. Fa "Ahoana no ahafahan'ny tapa-tofu iray ho ninja?" hanontany tena ianao. Vitany izany, ary haingana sy mahery ny fanafihany… ho an'ny tofu tofu iray, heveriko. Na izany na tsy izany, mahafinaritra kokoa ny lalao noho ny manazava azy, minoa ahy. Ary mampiankin-doha tokoa.
Toy ny sombin-tofu izay misy azy, ny mpihetsiketsika dia tsy afaka mihetsika toy ny toetra amam-panahy amin'ny lalao hafa; tsy maintsy mampiasa ny fombany mihetsika, izany hoe mitsambikina mahery (eny, mitsambikina) na mihodina mihodina amin'ny vatany, raha toa ka azo lazaina hoe mihodina ity zavatra fantatry ny tofu ity. Nilaza ny lalao fa mandeha an-tongotra izy io, na dia tsy heveriko ho izany koa aza.
Na izany na tsy izany. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mamindra ny toetrantsika amin'ny lafiny iray mankamin'ny ambaratonga mankany sambory ny baolina manga rehetra alohan'ny hikasihanay ilay cookie mavokely. Ireo baolina manga ireo dia toy ny kintana amin'ny lalao hafa ary, raha tsy mahatratra baolina ampy isika dia tsy handalo ny ambaratonga manaraka. Misy fomba roa hanetsehana ny sombin'ny tofu, araka ny nolazaiko teo aloha: ny voalohany dia ny mitsambikina avy amin'ny rindrina ka hatramin'ny rindrina. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fametahana ilay mahery fo antsika amin'ny rindrina izay irintsika hamindrana azy. Mila mikorisa amin'ny fihenjanana sasantsasany ianao, na mety tsy hahatratra ny toerana alehanao. Ny fomba faharoa dia ny mandeha, izay tratra amin'ny fikasihana amin'ny rantsantanana roa amin'ny lalana tiantsika hifindra ny ninja antsika.
Araka ny lazainay hatrany dia tsara kokoa ny misintona azy io raha amidy ary avy eo dia manapa-kevitra ianao hoe inona no hatao amin'izany. Heveriko fa i To-Fu Fury dia mijanona amin'ny iPhone sy iPad-ko. Ary koa, ny kely amin'ny fianakaviako dia azo antoka fa ho tian'izy ireo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » To-Fu Fury, sakafo ninja ao anatin'ny faran'ny herinandro
AnySpot ho an'ny iOS 9 dia mamela antsika hampiasa ny Spotlight amin'ny efijery rehetra